अँ हँ, ओ बा कति सालमा व्ये गर्या रे मलाई ? « प्रशासन
अँ हँ, ओ बा कति सालमा व्ये गर्या रे मलाई ?
चितवन । पखेरामा बनेको सानो झुप्रोको माइती घर । अगेना छेउमा मैलो चोलो र फरियामा डङ्रङ्ग सुतेकी छिन् ताराकुमारी चेपाङ । झिङ्गा भन्किरहेको छ । झिङ्गा आउँछ भनेर हातले नाकमुखमा छोपेकी छिन् ।
‘कति वर्षको हुनु भो दिदी ?’ कुरा सुरु गरें । ‘खै के‘था ?’ ताराकुमारीले छोटो उत्तर दिइन् । ‘क्या रे बाउ, मो कति भयो ?’ बुबा पट्टि फर्किएर सोधिन् ।
‘कति वर्षको हुनु भो दिदी ?’ कुरा सुरु गरें । ‘खै के‘था ?’ ताराकुमारीले छोटो उत्तर दिइन् । ‘क्या रे बाउ, मो कति भयो ?’ बुबा पट्टि फर्किएर सोधिन् । ‘खै ३०–३५ भो की ?,’ बाहिर भिरालो बारीमा टुक्रुक्क बसेरै बुबाले भने ।
‘यो पालिको मकै पोलेर खान पनि पुगेन,’ ताराकुमारीले भनिन्, – एक पाटाको के गर्ने सर, भुराले पोलेर खाइहाल्छ, कति पुगोस् त १ अहिले गाउँमा पर्म गर्यो, देउ न होई भन्यो, एक–एक पाथी माग्यो, खायो ।’
‘छोराले कमाउँलान् नि त ?’ भन्ने प्रश्नमा तिनले भनिन् – ‘छोराले के कमाउँछ ? त्यही आफ्नो ज्यान पाल्छ । नुन तेल ल्याउँछ, त्यही हो ।’
परिवारमा कसैले पढेका छैनन् । साना बच्चा पनि पढ्ने खालका देखिंदैनन् । पढाइप्रति चेतना नै छैन । ‘कोहीले नि परेन सर, के गर्ने अब ?’ – तिनले भनिन् ।
उनको घरमा अहिले खानका लागि अन्न छैन । खडेरीका बेला चेपाङ गाउँ सुख्खा छ । ‘एक एक ठाउँमा साहु हुन्छ नि सर ! भोलि हामी काम गरेर तिर्छौं भनेर एक एक पाथी दुई दुई पाथी मागेर खाने,’ ताराकुमारीले भेद खोलिन् ।
ताराकुमारीका ३ छोरा र ३ छोरी छन् । चार बच्चा चाहिँ पछिल्लो पटकका बर्सेनिका हुन् । यति कुरो चाहिं उनलाई थाहा छ । वर्ष कसैको थाहा छैन । न त आफ्नो वर्ष नै थाहा छ न त बिहे गरेको मिति नै । दुईजना छोराअलि ठूला छन् । जेठाको नाम राजु र माइलाको नाम माइलो नै । उनीहरु चितवनको रत्ननगरस्थित पिठुवामा मजदुरी गर्न गएको ताराकुमारीले बताइन् ।
अन्य ४ वटा बर्सेनिका भने उनीसँगै छन् । ‘कान्छाको नाम कान्छै हो, जेठी सञ्चमायाँ, यो सानी कान्छी, अनि यो कान्छी,’ तिनले औंल्याउँदै भनिन् । छोरा छोरी कति वर्षका भए भन्ने उनलाई हेक्का छैन । श्रीमान्को नाम रामप्रसाद चेपाङ ।
के गर्छन् त ?
एक पाटोमा के काम गर्नु ?
यसतर्फ न राज्यले ध्यान दिएको छ न गैरसरकारी संस्थालाई नै चासो छ । चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका प्रवास संयोजक समिर खत्री उनीहरुको अवस्था देखेपछि अब परिवर्तनका लागि अभियान नै चलाउने सोच बनाएको अनुभव सुनाउँछन् ।